Zimbabwe auctions 900,000 carats of diamonds - Telegraph
Zimbabwe auctioned 900,000 carats of rough gems from a diamond field where human rights groups say soldiers killed 200 people.
Prime minister Morgan Tsvangirai arrives at the Harare International Airport, where Zimbabwe was launching the certification for the selling of Marange diamonds Photo: GETTY
11:54PM BST 11 Aug 2010
The sale happened to coincide with the "blood diamonds" phase of the war crimes trial of Charles Taylor, the former Liberian president. Taylor's case and the Zimbabwe sale are unrelated, but both point to the successes and difficulties facing the campaign to regulate the trade in diamonds that has helped finance wars in Africa.
The auction in Harare, the capital of Zimbabwe, went ahead after the gems were certified as conflict-free by Abbey Chikane, a monitor for the Kimberley Process that oversees trade in the diamonds.
Zimbabwe's mines minister, Obert Mpofu, said Wednesday the country has 4.5 million Marange diamonds in stock, valued at up to $1.9 billion - one third of the national debt of a country whose economy has been ruined by corruption, mismanagement and Mr Mugabe's campaign against the country's white-minority farmers.